Google's Linux-yakavakirwa Chrome OS Flex kutyisidzira kukuru kune Windows 11, uye Microsoft inofanirwa kunetseka zvakanyanya
Windows 11 yakanaka chaizvo yekushandisa sisitimu, asi yakawandisa kune vakawanda vashandisi vepamba nedzidzo mazuva ano. Tisingatauri, zvinogona kuva nengozi kushandisa sezvo kune yakawanda malware yakagadzirirwa iyo. Kunyangwe kune bhizinesi, makambani mazhinji ari kushandisa chete webhu-based mhinduro mubrowser, kugadzira Windows zvisingakodzeri kwavari. Uye saka, maChromebook ari kuramba achiwedzera… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle's Linux-based Chrome OS Flex kutyisidzira kukuru kune Windows 11, uye Microsoft inofanirwa kunetseka zvakanyanya
Windows Kugadziridza kunoshandiswa neNorth Korea hackers kunzvenga chengetedzo software
Windows Kwidziridzo uye GitHub zvakashandiswa mumushandirapamwe neboka rine mukurumbira wecybercrime. Chii chaunoda kuziva Mushandirapamwe mutsva neNorth Korean yepamusoro inoramba ichityisidzira boka Razaro ichangobva kuwanikwa. Mushandirapamwe uyu wakashandisa magwaro akashata achinyepedzera kunge ari pabasa raLockheed Martin sechikamu chekurwiswa nepfumo. Boka raRazaro rakatorawo mukana… [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows Kugadziridza kunoshandiswa neNorth Korea hackers kunzvenga chengetedzo software
Zamkol ZT800 Earbuds ongororo: Aya bhajeti buds anounza bass
Aya mabuds anopa inogutsa bass-inorema yekuteerera ruzivo nemutengo wakaderera. Nepo tarisiro yekutengeka mahedhifoni inonakidza, bhajeti-kirasi sarudzo dzave zvakanyanya kuodza moyo nekuda kwekudzika-mhando yekuteerera, kusagadzikana dhizaini, uye kushomeka kwezvinhu. Nekuda kweizvi, vanhu vakasiiwa vasina imwe sarudzo kunze kwekubhadhara kune inodhura sarudzo ye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Zamkol ZT800 Earbuds ongororo: Aya bhajeti buds anounza bass
Iyo HP Envy 32 ndiyo yekupedzisira All-in-One PC - heino chikonzero
Kuve nePC yedesktop hazvifanirwe kureva kuve nebhokisi rakaparadzana, kutarisa, uye tambo dzisingaperi dzinomhanya pakati pezviviri. Kunyangwe iwe wakabatikana panzvimbo kana kungotsvaga chimwe chinhu chakareruka uye chakanyanya kunaka, iyo All-in-One PC inogona kunge iri sarudzo yakakukodzera. Uye nerombo rakanaka, kune mamwe makuru All-in-One Windows MaPC, senge HP Envy 34, iyo inokwirisa runyorwa rwedu rweakanakisa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyo HP Shanje 32 ndiyo yekupedzisira All-in-One PC - heino chikonzero
Motorola Razr 3 iri kuuya: Hezvino izvo zvatinoziva nezvazvo kusvika zvino
January 11, 2022 by Martin6
Mwaka wemafoni anopetwa wave patiri. Gore rakapera takaona vaviri vatsva vachipinda munzvimbo inopengeka smartphone - Xiaomi uye Oppo. Kunze kweizvi, Huawei neSamsung vakachengetedza rwendo rwavo rwekutanga kupetaable kuratidza mafoni gore-negore. Gore ra2022 rakatanga neRukudzo kuunza Honor Magic V, inova chiratidzo chekambani muchikamu ichi chemusika. Inotevera mumutsetse ndeye… [Verenga zvakawanda ...] nezve Motorola Razr 3 iri kuuya: Hezvino izvo zvatinoziva nezvazvo kusvika zvino
File Explorer yakagadzirirwa kuti ikurumidze pa Windows 11
Microsoft ichangoburwa preview update, inozivikanwa se Windows 11 Vaka 22526, sezviri pachena inouya neshanduko nyowani inofanirwa kuvandudza mashandiro eFaira Explorer. Mukuru wekupedzisira Windows Gadziridza yakagadziriswa nyaya hombe dzePC dzine AMD Ryzen CPU uye Microsoft yave kuronga kukwirisa File Explorer's yekutsvaga chishandiso. File Explorer yekutsvaga inoshandisa Windows Tsvaga kugadzira index uye ... [Verenga zvakawanda ...] nezve File Explorer yakagadzirirwa kukurumidza pa Windows 11
Windows 11's Device Manager pakupedzisira inoshandisa OS nzira panzvimbo yeA: (floppy disks)
Mutariri weDhidhiyo, iyo inoramba iri chirongwa chekutarisira kana kugadzirisa Hardware uye madhiraivha paPC, anouya nekumwe kuvandudza kudiki pa. Windows 11. Kana uine nyaya nemutyairi wako kana mugadziri wekombuta achida kuti uise madhiraivha kubva kumawebhusaiti avo, pane nzira yekuisa madhiraivha nemaoko. Kuti uite izvi, unogona kushandisa Dhidhiyo Maneja uye famba uchienda kunzira iyo ... [Verenga zvakawanda ...] pamusoro Windows 11's Device Manager pakupedzisira inoshandisa OS nzira panzvimbo yeA: (floppy disks)